2 Makoronike 4 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
Bhuku Rechipiri reMakoronike 4:1-22
Atari, Dziva, nemabheseni (1-6)
Zvigadziko zvemarambi, matafura, nezvivanze (7-11a)
Zvinhu zvepatemberi zvinopera kugadzirwa (11b-22)
4 Akabva agadzira atari yemhangura+ yakanga yakareba makubhiti 20, yakafara makubhiti 20, uye yakakwirira makubhiti 10. 2 Akagadzira Dziva*+ achishandisa simbi yakanyungudutswa. Rakanga riri reraundi, riine makubhiti 10 kubva kune rimwe divi remuromo waro kusvika kune rimwe divi remuromo waro, uye rakanga rakadzika makubhiti 5, uye paida tambo yakareba makubhiti 30 kuti uripoteredze.+ 3 Nechepazasi paro paiva nezvinhu zvekushongedza+ zvakaita semanwiwa madiki zvakanga zvakaripoteredza rese zvaro, pakubhiti rimwe nerimwe paine 10, zvichipoterera Dziva racho rese. Zvekushongedza zvacho zvakaumbwa zviri paDziva racho, zviri mumitsara miviri. 4 Rakanga rakagadzikwa pamikono 12 yemombe,+ nhatu dzakatarisa kuchamhembe, nhatu dzakatarisa kumavirira, nhatu dzakatarisa kumaodzanyemba, nhatu dzakatarisa kumabvazuva; uye Dziva racho rakanga rakagara pamusoro padzo, dzese dzakafuratira pakati. 5 Ukobvu hwaro hwakanga hwakaita seupamhi hwechanza;* uye muromo waro wakanga wakagadzirwa semuromo wekapu, seruva rakatumbuka. Raipinda mabhati* 3 000. 6 Akagadzirawo mabheseni 10 ekusukira uye akaisa mashanu kurudyi uye mashanu kuruboshwe.+ Vaisukira maari zvinhu zvaishandiswa pakupa chibayiro chinopiswa.+ Asi Dziva ndiro raigezerwa nevapristi.+ 7 Akabva agadzira zvigadziko 10 zvemarambi zvegoridhe+ semagadzirirwo azvaifanira kuitwa,+ akazviisa mutemberi, zvishanu kurudyi uye zvishanu kuruboshwe.+ 8 Akagadzirawo matafura 10 akaaisa mutemberi, mashanu kurudyi uye mashanu kuruboshwe;+ uye akagadzira ndiro 100 dzegoridhe. 9 Akabva agadzira chivanze+ chevapristi+ nechivanze chikuru*+ nemasuo echivanze chacho, achibva aaisa mhangura. 10 Akaisa Dziva racho kudivi rekurudyi, kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva.+ 11 Hiramu akagadzirawo makeni, mafoshoro, nendiro.+ Saka Hiramu akapedza basa raakaitira Mambo Soromoni paimba yaMwari wechokwadi.+ Izvi ndizvo zvaakagadzira: 12 mbiru mbiri+ nemisoro miviri yakaita sehari yaiva pamusoro pembiru dzacho mbiri; mambure maviri+ ekufukidza misoro miviri yakaita sehari yaiva pamusoro pembiru dzacho; 13 mapomegraneti* 400+ emambure acho maviri, mitsara miviri yemapomegraneti pamambure mamwe nemamwe, kuti ifukidze misoro miviri yakaita sehari yaiva pambiru dzacho;+ 14 zvingoro 10* nemabheseni 10 aiva pazvingoro zvacho;+ 15 Dziva nemikono 12 yemombe yaiva pasi paro;+ 16 nemakeni, mafoshoro, maforogo,+ nemimwe midziyo yese yakagadzirirwa Mambo Soromoni naHiramu-abhivhi+ achishandisa mhangura yakakweshwa kuti ipenye, zveimba yaJehovha. 17 Mambo akaumbira zvinhu izvi mudunhu reJodhani achishandisa ivhu gobvu riri pakati peSukoti+ neZaretani. 18 Soromoni akagadzira midziyo yese iyi yakawanda chaizvo; kurema kwemhangura yacho hakuna kuzivikanwa.+ 19 Soromoni akagadzira midziyo yese+ yeimba yaMwari wechokwadi inoti: atari yegoridhe;+ matafura+ aiva nechingwa chekuratidza;+ 20 zvigadziko zvemarambi nemarambi azvo achishandisa goridhe rakanatswa,+ kuti abvire pamberi peimba yemukati sezvaifanira kuitwa; 21 nemaruva akatumbuka, marambi, nezvekubvisisa tambo yapera kubvira,* achishandisa goridhe, goridhe rakanatswa kupfuura rimwe rese; 22 zvekudzimisa moto, ndiro, makapu, nemidziyo yekuisira moto, achishandisa goridhe rakanatswa; suo reimba yacho, masuo ayo emukati eNzvimbo Tsvenetsvene,+ nemasuo etemberi,* achishandisa goridhe.+
^ Kana kuti “nenzvimbo huru yakakomberedzwa.”
^ Apa pari kureva Nzvimbo Tsvene.
2 Makoronike 4